Okere a kpụpụla Uzodinma n’ụlọikpe ọzọ maka okwu ntuliakaelu 2019 - Igbo News | News in Igbo Language
Okere a kpụpụla Uzodinma n’ụlọikpe ọzọ maka okwu ntuliakaelu 2019
Jul 21, 2020 - 11:08 Updated: Jan 26, 2021 - 11:08
By Chidimma Nwogu, VON
Onye ọzọ akpụpụla Gọvanọ Hope Uzodinma nke steeti Imo ụkwụ n’ama ọzọ dịka o si metụta ntuliakaelu gọvanọ nke afọ 2019 bụ nke o wepuru n’ụlọikpe.
Ụlọikpe ukwu nọ n’Abuja nọrọ n’ụbọchị Wenezde kweta ịnụ mkpesa dị n’akwụkwọ nke otuonye ndorọndọrọ ọchịchị gbara iji chutuo Uzodinma n’oche Gọvanọ Imo Steeti.
N’akwụkwo ikpe bu akara FHC/ABJ/CS/656/20 nke ọkaiwu Kingdom Okere bụ onye fere ọkọlọtọ otu pati ‘Reform and Advancement Party (RAP) gbara, o kwuru na Hope Uzodinma ịnọ n’ọkwa gọvanọ megidere iwu n’ihi na o soghi zọọ ntuliaka 2019 n’aha pati ọbụla.
Okere chọrọ ka ụlọikpe kọwa ma ọ bụ Hope Uzodinma ka APC nyere nkwado ịzọ ọkwa gọvanọ na ntuliaka e mere na steeti ahụ n’afọ 2019.
O gwara onye ntaakụkọ Igbo n’ekwentị na akwụkwọ ahụ ya gbara gbadoro ụkwụ na “Uzodinma na-achị Imo Steeti n’ụzọ iwu na-akwadoghi. Uzodinma azọghị ọkwa gọvanọ.”.
Ọ sị na mkpebi ụlọikpe kachasị nyere nke kwuru na ọ bụ Uche Nwosu ka APC họpụtara n’ezie ka ọ fee ọkọlotọ ha na ntuliaka gọvanọ, ebe ọ bụkwa ụlọikpe kachasi kwukwara na Nwosu agaghị abụ onye na-anọchite pati abụọ; APC na AA n’otu ntuliaka maka ọkwa gọvanọ.
Okere rịọrọ ụlọikpe ka ha tụlee ikpe ahụ ngwangwa n’ihi na dịka o siri kwuo, okwu ahụ bụ okwu dị mkpa.
Mana ọkaikpe Inec bụ Alhassan Umar, riọrọ ka e nye ha ohere iji saa okwu n’ikpe ahụ.
N’ịtụnye ọnụ n’ikpe ahụ, Jọstis Okon Abang yigharịrị ya n’ụbọchị Julaị 20, afọ 2020 bụ oge o kwuru a ga-anụ mkpesa ahụ.
N’ọsịsa ha, ọnụ na-ekwuru Uzodinma bụ Ogwuike Nwachukwu si na akwụkwọ ahụ agbara bụ njem e ji azụ aga,
“Ọ bụ njem enweghị ebe ọ na-eduga, nrọ nwakanchi”